Jizọs Ekpee Ekpere n’Ogige Getsemeni | Ihe Ndị Mere ná Ndụ Jizọs
GỤỌ NKE Alur Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bicol Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Jula Kazakh Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Lingala Luganda Luo Macedonian Malagasy Malay Maltese Mauritian Creole Maya Moore Myanmar Norwegian Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tatar Thai Tigrinya Tshiluba Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Uruund Uzbek Vietnamese Wallisian Waray-Waray
MATIU 26:30, 36-46 MAK 14:26, 32-42 LUK 22:39-46 JỌN 18:1
MGBE JIZỌS NỌ N’OGIGE GETSEMENI
ỌSỤSỌ YA DỊ KA ỌBARA NKE NA-ATAPỤSỊ N’ALA
Mgbe Jizọs na ndịozi ya kpechara ekpere, ya na ha bụrụ abụ ma gaa n’Ugwu Oliv. (Mak 14:26) Ha gawara n’ogige a na-akpọ Getsemeni, bụ́ ebe ọ na-agakarị. Ogige a dị n’ebe ọwụwa anyanwụ Jeruselem.
Ozugbo ha ruru n’ogige a mara mma osisi oliv juru, Jizọs hapụrụ ndịozi ya asatọ ma baa n’ime ogige a. O nwere ike ịbụ na ọ hapụrụ ha ná mbata ogige a n’ihi na ọ sịrị ha: “Nọdụnụ ala n’ebe a ka m gaa ebe nke ọzọ wee kpee ekpere.” Ọ kpọọrọ ndịozi ya atọ aha ha bụ Pita, Jems, na Jọn baa n’ime ogige ahụ. O bidoro ichegbu onwe ya nke ukwuu ma gwa ha, sị: “Ọ na-ewute mkpụrụ obi m nke ukwuu, ọbụna ruo ọnwụ. Nọrọnụ n’ebe a, sorokwanụ m na-eche nche.”—Matiu 26:36-38.
Mgbe Jizọs gatụkwuru n’ihu, “ọ dara n’ala wee malite ikpe ekpere.” Gịnịkwanụ ka ọ na-arịọ Chineke ka o meere ya n’oge a? Ọ sịrị Chineke: “Nna, ihe niile kwere omume n’ebe ị nọ; wepụ iko a n’ebe m nọ. Ma ọ bụghị ihe m chọrọ, kama ihe ị chọrọ.” (Mak 14:35, 36) Olee ihe okwu Jizọs pụtara? Ọ̀ chọrọ ịgbara àjà Chineke chọrọ ka o jiri ndụ ya chụọ ọsọ, bụ́ ihe a ga-eji gbapụta ụmụ mmadụ? Mba.
Jizọs anọrọla n’eluigwe hụ otú ndị Rom si emekpọ ndị ha na-egbu ọnụ. Ugbu a ọ bụ mmadụ, o nwere obi ọmịiko, ihe na-emetụkwa ya n’ahụ́. N’ihi ya, ọ naghị agụsi ya agụụ ike ka mgbe a ga-ata ya ahụhụ ruwe eruwe. Ma, ihe kacha eme ka ọ na-echegbu onwe ya bụ na ọ ma na ọnwụ ọ na-aga ịnwụ ka onye omekome nwere ike ime ka a kọchaa aha Nna ya. N’awa ole na ole, a ga-akpọgide ya n’osisi ka à ga-asị na ọ bụ onye na-ekwulu Chineke.
Mgbe Jizọs kpechara ekpere ruo ogologo oge, ọ laghachiri ebe ndịozi ya atọ ahụ nọ ma hụ na ha na-ehi ụra. Ọ gwara Pita, sị: “Ọ̀ bụ na unu enweghị ike iso m chee nche ruo ọbụna otu awa? Na-echenụ nche ma na-ekpe ekpere mgbe niile, ka unu wee ghara ịbanye n’ọnwụnwa.” Jizọs ghọtara na ike gwụchara ndịozi ya ahụ nakwa na chi ejimiela. N’ihi ya, o kwuru, sị: “N’ezie, mmụọ dị njikere, ma anụ ahụ́ adịghị ike.”—Matiu 26:40, 41.
Jizọs gaghachiri ebe ahụ ọ nọ na-ekpe ekpere ma rịọ Chineke ka o wepụrụ ya “iko a.” Mgbe ọ laghachiri ebe ahụ ndịozi ya atọ nọ, ọ hụrụ ha ọzọ ka ha na-ehi ụra mgbe ha kwesịrị ịna-ekpe ekpere ka ha ghara ịdaba n’ọnwụnwa. Mgbe Jizọs gwara ha okwu, “ha amaghị ihe ha ga-aza ya.” (Mak 14:40) Jizọs gaghachikwara ebe ọ na-ekpe ekpere ma gbuo ikpere n’ala kpee ekpere.
Jizọs na-echegbu onwe ya nke ukwuu otú ọnwụ ọ na-aga ịnwụ ka onye omekome ga-esi mee ka a kọchaa aha Nna ya. Jehova nọ na-anụ ekpere Ọkpara ya. N’ihi ya, o nwere mgbe o ruru, ya ezite mmụọ ozi ya ka o mee ka Jizọs dị ike. N’agbanyeghị nke ahụ, Jizọs akwụsịghị ikpegara Nna ya ekpere. Ọ nọ “na-ekpesi ekpere ike karị.” Jizọs na-echegbu onwe ya nke ukwuu. Ihe dị ya n’aka abụghị obere ihe. Ndụ ebighị ebi nke ya na nke ụmụ mmadụ ndị kweere na Chineke dị ya n’aka. Ihe ndị a mere ka ‘ọsụsọ ya dịrị ka ọbara nke na-atapụsị n’ala.’—Luk 22:44.
Mgbe Jizọs gaghachiri na nke ugboro atọ ya n’ebe ahụ ndịozi ya nọ, ọ hụkwara ha ka ha na-ehi ụra. Ọ sịrị ha: “N’ụdị oge dị otú a ka unu na-ehi ụra, na-ezu ike! Lee! Oge awa ahụ eruwo nso ka a rara Nwa nke mmadụ nye n’aka ndị mmehie. Bilienụ, ka anyị pụọ. Lee! Onye ga-arara m nye abịawo nso.”—Matiu 26:45, 46.
Luk onye ọgwọ ọrịa ekwughị otú ọsụsọ Jizọs si ‘dị ka ọbara nke na-atapụsị n’ala.’ (Luk 22:44) O nwere ike ịbụ na Luk ji okwu ahụ mee ihe atụ, ya bụ, na ọsụsọ ya yiri ọbara si n’ebe mmadụ merụrụ ahụ́ na-atapụ. N’otu akwụkwọ ndị na-ahụ maka ahụ́ ike dere, dọkịta aha ya bụ William D. Edwards kwuru ihe ọzọ o nwere ike ịbụ. Ọ sịrị: ‘Ọsụsọ ya na ọbara gwakọtara nwere ike ịna-agbapụta mmadụ n’ahụ́, ọ bụ eziokwu na ọ naghị emekarị. Ọ bụrụ na mmadụ echegbuo onwe ya gabiga ókè n’ihi nsogbu ọ nọ na ya, irighiri akwara ndị dị onye ahụ n’ahụ́ nwere ike ịgbawa, ọbara esi ebe ahụ gbapụta, ya na ọsụsọ agwakọta. Mmadụ hụzie ọsụsọ ahụ ya echee na ọ bụ naanị ọbara.’
Mgbe Jizọs na ndịozi ya pụtachara n’ọnụ ụlọ dị n’elu, olee ebe Jizọs kpọ ha gaa?
Gịnị ka ndịozi Jizọs atọ nọ na-eme mgbe Jizọs na-ekpe ekpere?
Olee ihe ọsụsọ Jizọs ịdị ka ọbara na-egosi banyere otú obi dị ya?
Gịnị Mere Anyị Ga-eji Na-ekpe Ekpere n’Aha Jizọs?
Lee otú ikpe ekpere n’aha Jizọs si egosi na anyị na-akwanyere Chineke na Jizọs ùgwù.